राईटर्स क्राम्प - विकिपिडिया
राईटर्स क्राम्प व्यक्तिको कार्य या व्यवसायसँग सम्बन्धित रोग हो । यसबाट प्रभावित व्यक्ति जब लेखन कार्य प्रारम्भ गर्दछ । त्यसबेला उसलाई यस्तो प्रतित हुन्छ, जस्तै बुढी औंला या औलाहरूमा शक्ति नै छैन । रोगको प्रारम्भमा हातका औलाहरूमा एक प्रकारको कडापन महशुस हुन्छ ।
भौतिक दृष्टिले हेर्दा उसको हातका मान्सपेशीहरूमा कुनै प्रकारको खराबी देखिंदैन। रोगी यसको लागि जति बढि चिन्तित् हुन्छ त्यति नै मानसिक तथा स्नायु सम्बन्धि अवसाद बढ्दछ। साथै हातको अन्य मांशपेशीहरु पनि तनावग्रस्त हुन्छन्। बैङ्कमा हस्ताक्षर गर्दा, रिस उठेको बेला, तनावको अवस्थामा कुनै कार्यलाई चाँडै गर्नुछ अथवा अपरचित व्यक्तिको सम्मुख लेख्ने कार्य लगभग असंभव हुन्छ। फलस्वरुप धेरै दिनसम्म यस्तै हालतमा रहियो भने टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने, स्नायु दुर्बलता जस्ता समस्याहरु हुन सक्छन्।
बिरामीले लेख्ने कार्य बन्द गर्ने बितिक्कै उसको सबै समस्याहरु समाप्त भएर जान्छ। यस प्रकारको रोगी या त लेख्न कार्य नै बन्द गरी दिन्छन् या अर्को हातबाट लेख्ने कार्य शुरु गर्दछ अर्थात दाहिने हातले लेखन कार्य गर्ने रोगी त्यसै कार्यलाई देब्रे हातले गर्ने प्रयास गर्न थाल्छ। तर यस्तो पनि देखिएको छ कि कलान्तरमा पछि गएर त्यस हातमा पनि यहि दोष उत्पन्न हुन थाल्दछ। यस प्रकारको रोगीलाई लेख्ने कार्यको अलावा आफ्नो दाह्री बनाउदा, आफ्नो सर्टको टाँक लगाउन, कस्मेटिक सौन्दर्य प्रसाधनको प्रयोगमा तथा खाना खानमा पनि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। यसप्रकारको तनाव या कम्पन अनुहार या शरीरको अन्य भागमा, जिब्रो वा गर्धनमा पनि हुन सक्छ। यसलाई चिकित्सिय भाषामा फोकलडिस्टोनिया या आक्युपेशनल डिसटोनिया भनिन्छ।
१ राईटर्स क्राम्प/कम्पन्न रोगको लक्षण
३ रोगको निदान
४ होमियोप्याथिक उपचार
राईटर्स क्राम्प/कम्पन्न रोगको लक्षण[सम्पादन गर्ने]
लेख्ने बेला हातमा या हातको कुनै भागमा कम्पन,
जसले गर्दा हस्ताक्षर गर्न असमर्थ हुनु।
केहि बाक्य लेखि सकेपछि शब्दहरु बांड्गो–टेड्गो हुनु र लेखाई खराव हुनु।
लेख्न कार्य को गतिमा कमि हुनु र बढि लेख्न नसक्नु।
लेख्ने समयमा हात या हातको कुनै भाग भित्र–बहिर पट्टि स्वत मोडिनु।
लेख्ने बेला पेन या पेन्सिललाई मजबुत किसिमले समाउनु, लेख्ने समय कलम स्वत, हातबाट झर्नु।
लेखन कार्य गर्दा हात व्यक्तिको नियन्त्रमा नहुनु। यसका प्रमुख लक्षणहरु हुन्।
यसमा दिईएका लक्षणहरु मध्ये यदि कुनै पनि लक्षण तपाईमा छ भने बेलामै सावधान हुनुहोस्। यस रोगको शुरुवात भएको जस्तो छ। यो रोग कुनै पनि उमेरमा लेखन कार्य गर्ने, स्टोनो-टाईपिष्ट, प्रशासनिक कार्यमा लागेको व्यक्ति, लेखक वा लेखाका कर्मचारी, ड्राफ्ट्सम्यान, चिकित्सक (सर्जन) ईन्जिनियर, केमिष्ट,पियानो बजाउने, कार्पेन्टरको काम गर्ने व्यक्तिलाई हुन सक्छ। साधारणतया १७ देखि १८ वर्षका उमेरका व्यक्तिहरूमा शुरु हुन सक्छ। तर, रोगीलाई मेरो रोग यहि नै हो भनेर सम्झन-बुझ्न वर्षौ लाग्न सक्छ। यसो हुनुको कारण भनेको लक्षणहरूलाई रोगी अथवा उसका आफ्न्तहरु शुरुमा शारीरिक कमजोरी, रोगीको लापरवाही या मनोवैज्ञानिक समस्या हो भनेर सम्झिन्छन्।
यस सम्बन्धमा मनोबैज्ञानिकहरु एकमत देखिंदैनन्। केहिको भनाइअनुसार यो एक प्रकारको स्नायुमण्डलीय विकार हो। केहि मनोबैज्ञानिकहरुका अनुसार यो एक प्रकार मानसिक रुप (मन) ले उत्पन्न भएको शारीरिक (तन) को रोग हो। केहि चिकित्साहरुका अनुसार मस्तिष्कमा अवस्थित 'उपांग वेसल गैंगलियान'ले ठिकसँग काम नगर्नु हो। यस उपांगको कार्य शरीरका विभिन्न अगंहरूमा समन्वय बनाएर राख्नु हो। वेसल गैंगलियान उपांगको गडबडिको कारण यस रोगबाट प्रभावित अगंले - मस्तिष्कले पठाएको निर्देशन अनुसार कार्य या व्यवहार गर्दैन। जसको फलस्वरुप रोगीलाई, यस रोगबाट प्रभावित अंगमा कडापन, कम्पन आदि जस्तो समस्या हुन्छ।
यस रोगको निदान मुख्य रूपमा रोगीको व्यक्तित्वलाई अध्ययन गर्नुका साथै लेखाइको जाँच गरिन्छ। रोगीले दिनभरिमा कति लेख्द छ? कस्तो लेख्द छ? लेखाईको गति कस्तो छ? आदि कुराको परख गरिन्छ। यसबाहेक आवश्यकता अनुसार उसको मांपेशीहरूको बिद्युतीय गतिबिधिको जाँच (ईएमजी) र घाँटीको एक्स-रे पनि गरिन्छ। जसद्वारा यी लक्षणहरु यसै रोगको हो वा अन्य कुनै रोग को हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
होमियोप्याथिक उपचार[सम्पादन गर्ने]
होमियोप्याथिक उपचारमा रोगीको मानसिक एवं शारीरिक तथा पारिवारिक, आर्थिक ,सामाजिक अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर यदि उपयुक्त औषधिको चयन गर्न सकियो भने यस रोगमा स्थाई एवं अप्रत्याशित फाईदा हुन्छ। जसलाई यो समस्या भएको धैरै समय भएको छैन त्यस्ता रोगीले उपचार गर्दा ३/४ महिना भित्र फाईदा भएको देखिन्छ भने रोग पुरानो भएमा बढि समय लाग्न सक्छ। धेरै जसो रोगीहरूमा राईटर्स क्राम्प रोगका लक्षणहरूको मुक्ति पछि पनि रोग पुन: देखा पर्दछ। त्यसैले फाईदा भए पछि पनि बिरामीले औषधिको सेवन चिकित्कको सल्लाह बिना बन्द गर्नु हुँदैन। पुरा कोर्ष गर्नु पर्दछ ताकि रोगको पुनरावृतिको सम्भावना नरहोस। यस रोगमा प्रयोग हुने केहि औषधिहरु निम्न लिखित छन।
मेगफाँस, कलकेरियाफाँस, नेट्रमफाँस, नेट्मम्युर, कालिम्युर, साईलिशिया, कल्केरिया कार्ब, जिकंममेटालिकम, मर्कसल, कुप्रम मेटालिकम, साईक्लामेन, एनाकर्डियम, चेलिडोनियम, स्टेनम, सलफर आदी।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=राईटर्स_क्राम्प&oldid=904152" बाट अनुप्रेषित